Nezve iyo OpenVax chirongwa. Imwe nzira yekumiswa kwepamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Nezve iyo OpenVax chirongwa. Imwe nzira yekumiswa kwepamutemo
Diego ChiGerman Gonzalez | | Noticias
Mumazuva ekupedzisira mukana wekumisa patents wakapihwa kune vanogadzira majekiseni eECVID uri kukurukurwa. Sezviri pachena iyi hurukuro kungo gutsa vezvenhau uye vanoita zvematongerwo enyika. Izvo hazvitombowana mvumo yeUnited States Congress, ndoda kubvumirana kweWorld Trade Organisation.
1 Ipfungwa yakanaka?
2 Nezve iyo OpenVax chirongwa uye nei iri imwe nzira iri nani
Vamwe vanoti ipfungwa ine njodzi. Vanhu ava vanosimbisa kuti kana marabhoritari akamanikidzwa kuendesa zvibvumirano, kuti vawane mushonga wedenda rinotevera isu tichavimba nemarabhoritari eRussia neChina (Zvakasimba zvinoenderana nehurumende) hapana wekuMadokero achanetseka nekuongorora. Uye zvakafanana zvinoenda kuzvirwere zvakakura sekenza kana osteoarthritis.
Mukutsigira vanopa nyaya yepenicillin. Alexander Fleming, pachinzvimbo chekupa patent, akazvipa kuHumanity. Sezvo chero munhu aigona kuzviita (kudzikisira purofiti yayo) hapana munhu akanetseka kuzviita kusvikira Hondo Yenyika II yaita kuti zvive zvakakosha.
Kune rimwe divi, kumbomisa patents kwaisazove nechero mukana unowanikwa neyakavhurika sosi. Kunyangwe kana imwewo marabhoritari yakawana shanduko mukugadzira kana mukuita, haina kukwanisa kuishandisa. Uyewo hauzokwanisi kuisa zvawakadzidza kune zvimwe zvigadzirwa.
Chinhu chinonakidza ndechekuti kana Mutungamiri Biden, Bill Gates nevamwe vamiriri vekupa basa remumwe munhu Ivo vanofarira zvechokwadi kuita kuti majekiseni asvike kune wese munhu, vane chirongwa chavanogona kutsigira.
Nezve iyo OpenVax chirongwa uye nei iri imwe nzira iri nani
OpenVax chirongwa chakabatana cheOpen Source Pharma Foundation, Harvard University Chikoro cheMishonga, uye Hurumende yeIndia kurwisa COVID-19 nemamwe maronda kuburikidza kugadzirisa majekiseni aripo, akadhura-kudhura uye anoratidzwa nematanho akapera. Iyo yekutanga iri kutoedza chikamu chechitatu.
Vaya vane basa neprojekti vanotenda kuti vanogona kukwikwidza nemarabhoritari makuru, asi vasina kumbobayira chirevo chekuenzana kubvira mamwe majekiseni ekudzivirira hutachiona anodzivirira kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana, zvichibva pane izvo zvinonzi "yakadzidziswa hutachiona hwekuzvarwa"
Zvakanakira kushandisa majekiseni ekare anozivikanwa uye asina-patent, achienzaniswa neaya akagadzirwa uye ane patent yakanangana neCOVID ndeaya:
Ipfupi nguva yekuvandudza: Ivo vanofanirwa kungoedzwa chete kugona kwavo kudzivirira COVID, mamwe ese matanho ekumomerera akatove akaitwa.
Vakachengeteka: Nekuve nesu kwenguva yakareba, isu tatoziva kana vane migumisiro yakaipa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vazoda kuipfeka.
Kunyanya kushanda mukufamba kwenguva: Iyi majekiseni ekudzivirira zvirwere anotsvaga kudzidzisa immune system kuti ipindure kune ngozi kune vese kwete hutachiona, saka pamwe haizodi kumutswazve kana paita shanduko.
Mariro: Sezvo majekiseni aya atove kuzivikanwa uye asina patent, mutengo wawo wekugadzira uye wekutenga unenge wakaderera.
Kushandisa zvirinani kwemari yeruzhinji: Panzvimbo pekuendesa mari kune yerabhoritari yekunze, hurumende dzinogona kusimudzira yavo indasitiri yemishonga.
Iyo purojekiti Iyo ine mari yemamirioni gumi emadhora. Izvi zvinoita kunge zvakakwana kuyedza uye zvivakwa zveumwe neumwe mubatanidzwa majekiseni kusvika pakupera kwechikamu chechitatu miedzo uye, kana mumwe akawanikwa achishanda, kusvika pakugadzira uye kutanga kugovera. Nekudaro, ivo vanogamuchira mipiro sezvo muyedzo wega wega uchidhura mashoma emadhora mazana mashanu emadhora.
Pasina kupa dzidziso dzisina basa, chokwadi ndechekuti kana denda iri rikapfuura, World Health Organisation nehurumende dzakasiyana dzichafanira kupindura kuvagari vadzo nezvekunonoka uye kusakwanisa kubata denda uye nei munguva yeBig Data yakashandura kumatanho epakati nepakati senge kuwanda kwevasungwa. Mune imwe chinyorwa Ini ndakanyora como open source maturusi akabatsira kurwisa nhau dzenhema uye kubviswa kwekodzero zvichibva mukutya.
Nyanzvi yezvekurapa uye indasitiri yemishonga inofanirwawo kugadziriswa. Uye, handina mubvunzo chiie kushandiswa kwemaziviso eakavhurwa sosi inoita imwe nani nzira iyo populist inoyera iyo, kana ikaitwa, ichaunza muripo kuti tinozopedzisira tabhadhara vateresi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nezve iyo OpenVax chirongwa. Imwe nzira yekumiswa kwepamutemo
Zvinhu zvadzokera pane zvakajairwa: Ubuntu 21.04 inokurumidza kupfuura yazvino kuvaka Windows 10
/ e / OS: nharembozha yekubvisa Google